macluumaad Visa - Poltava Medical & ilkaha Academy
Dhammaan ardayda caalamiga ah helaan fiisaha daraasad ay galaan Ukraine. Ardayga waa in ay soo gudbiyaan Martiqaad asalka iyo warqad gelitaanka safaaradda Ukraine marka fiisaha ka codsaday.
Codsadayaasha waa in la Ukraine ee safaaradda ama qunsuliyadda ugu dhow loo hubiyo in ay u baahan yihiin fiise inay soo galaan Ukraine. warqad martiqaad ama oggolaanshaha waxaa soo saaray Medical Yukreeniyaan & ilkaha Academy, waaxda xiriirka Caalamiga ah.
Si aad u hesho Martiqaad ay u Baro iyo Letter Admission, ardayga waa in la siiyo nuqul ka wanaagsan oo tayo leh scan dokumentiyada soo socda,
International Passport / Socdaalka dokumenti bogga xogta oo sawir ku dul. Magaca buuxa ee ardayga iyo Number Serial ee Passport waa in ay si cad u ansax VISIBLE.The ee Passport aan ka yarayn soo socda 1 sanadkii
Waraaqaha Waxbarashada heerka O / SSCE / HSSC,Bachelor ama Master Degree haddii la heli karo
Magaca, Magaca Dhexe iyo Magac
Passport taariikhda ansax ah arrinta & dhicitaanka
cinwaanka Ku Meel Gaarka / cinwaanka hadda haddii qaab duwan cinwaanka joogto ah
Visa Bixinta Country / meel
Yukreeniyaan CAAFIMAAD STOMATOLOGICAL TACLIINTA Ardayda (MSA) bilaabataa soo saaray dalab warqad ka January sannad kasta oo lagu marti bil APRIL ka.
Ardayga waa in uu leeyahay si ay u gudbiyaan eedaymaha EE jaale hoy,warqad taageero fiisaha iyo warqaadayaal .Bal lagu xusay doonaa warqad gelitaanka ee 10 maalmood oo shaqo haddii kale waxaan joojin kartaa admission.After ka qaadan University eedeeyay bilaabi doonaa processing waayo Martiqaad Letter oo ku qaadan doonaa 4 maalmood oo shaqo si aad u dhamayso ee warqad casuumad.
Ardayda waa inay la xiriiraan safaaradda Ukraine in uu / iyada dalka si ay u dalbato fiisaha ardayga ka dib naga helin warqad martiqaad asalka. Wadamada qaarkood safaaradda Ukraine bilaabataa Codsiyada Visa Ardayga iyo ardayga arrinta Visa by 15 July in 15-November sida caadiga ah waxaa loo kordhiyay in ay December / March shaqeeya(kooras diyaarinta).
Dukumentiyada soo socda waa in la soo gudbiyaa ee Ukraine safaaradda si ay u helaan arday Visa.
Waraaqaha loo baahan yahay si loo helo arday Visa
Foomka codsiga Visa buuxiyeen
International Passport Socdaalka Document sax ah aan ka yarayn hal sano
Letter Martiqaad Original ka University
Shahaadada Dhalashada, Turjumay luqada Yukreeniyaan iyo sharciyayn Nootaayaha Guud ama Ukraine Safaarada
School Original heerka Certificates O / SSCE / HSSC, Bachelor ama Master Degree haddii la heli karo, Turjumay luqada Yukreeniyaan iyo sharciyayn Nootaayaha Guud ama Ukraine Safaarada
Letter of ansixinta ka Wasaaradda Waxbarashada
General Health- Certificate Medical soo saaray ugu yaraan laba bilood ka hor laga galo in si Ukraine. Turjumay luqada Yukreeniyaan iyo sharciyayn Nootaayaha Guud ama Ukraine Safaarada Waa loo sharciyeeyo by Wasaaradda Caafimaadka
HIV- AIDS Certificate xun soo saaray ugu yaraan laba bilood ka hor laga galo. Tarjumay galay Language Ukraine iyo sharciyayn Nootaayaha Guud ama Ukraine Safaarada. Waa in loo sharciyeeyo by Wasaaradda Caafimaadka
Wakiilashada Letter ka Waalidiinta / Qofka waa kuma kan inuu qaado kharashka ardayga inta / waxbarasho ee Ukraine. Ma aha oo shardi looga dhigayo oo dhan jinsiyadaha
Bayaanka Bank si ay u caddeeyaan awoodda dhaqaale. Ma aha oo shardi looga dhigayo oo dhan jinsiyadaha
Iyo dib u fiirinayaan Air tigidh sax ah muddo hal sano ah
Ardaygu wuxuu u baahan yahay in la xiriir safaaradda Ukraine in isaga / iyada dalka joogto joogtid / ku meel gaar ah. Safaaradda Ukraine ma u baahan tahay turjumaad oo aan Ruush / Ukrainian for dalal qaar ka mid ah.
Fadlan hubi sameeyaan ka hor inta uusan dalkaaga oo dhan hoos ku sheegay in waraaqaha waa in ay idin la, saraakiisha socdaalka ee garoonka diyaaradaha ee weyddiinayaa for dokumentiyadan.
20 sawiro qiyaaso kasta 3 × 4 size.
Result ee HIV - shahaado baaris caafimaad (waa in lagu turjumaa af Ukraine iyo sharciyayn dadweynaha Nootaayaha ama safaaradda Ukraine ee dalka).
shahaadada caafimaadka guud / shahaadada taam Physical (waa in lagu turjumaa af Ukraine iyo sharciyayn safaaradda Ukraine ee dalka).
shahaadooyinka School Original (waa in lagu turjumaa af Ukraine iyo sharciyayn safaaradda Ukraine ee dalka).
Shahaadada Dhalashada Original ( waa in lagu turjumaa af Ukraine iyo sharciyayn safaaradda Ukraine ee dalka).
Mid ka mid ah nuqul Photostat of baasaboor iyo fiiso Ukraine oo la soo saaray safaaradda Ukraine.
Warqad Martiqaad Original.
tigidh Duulimaadka waa in hore iyo dibba u dalkaagii hooyo (i.e., tigidh furan).